SEENAA GOOTA ILMA OROMOO AADAM DHEEREE!! – Kichuu
SEENAA GOOTA ILMA OROMOO AADAM DHEEREE!!
Maqaan isaa Guutuun Aadam Aliyyee Boruu Callaa ja’ama, Garuu Maqaan inni Ummta Oromoo biratti beekkamuun Irra Caalatti Aadam Dheeree jechuudhaan beekkama.Aadam dheereen bara 1979tti baha Oromiyaa Aanaa Mi’eeyso, Asaboot Diida Diinnii Ganda Sallaanii/Tiyfattuu Dirree Qaalluu bakka Ja’amtutti, Abbaa isaa Obbo Aadam Aliyyee Boruutii fii Haadha isaa Aadde Maxeebiilee irraa dhalate.
Aadam dheereen Obboleeyyan dhiiraa 6 fii Shamarranii 5 qaba. Xiqqeenyummaa isaarraa Re’ee, Loonii fii Gaala Tiysaa hanga Umrii Waggaa 16 gehutti Maatii isaa gargaaraa ture.Hoggaa Umriin isaa 17 gehu 1996tti Gootummaa qaburraa kan ka’e Qabsoo Oromottiin dabalama je’ee Manaa bahe. Yeroo sanitti Umriin isaa Daa’ima Waan taheef osoo deemuu Kara deemu Wallaaluun Karaa irraa badee Dargaggoota Lama karatti wal arkee wal bareen. Dargaggoonni Lamaaniis Musxafaa Fii Jamaal kan jedhaman, isaaniis Warra Harargee Bahaarraa osoo Mootummaan barbaadamanii jala baduun kharaa Jibuutii deemna je’anii deemaa jiraniidha. Inniniis Dargaggoota kana Jala hin hafu je’ee achumaan gara Jibuutii Imalee achu Jibuuti Seene.
Jibuutii Keessatti Osoo namaaf hojjatuu Afaan Somaalee Fii France akka Gaaritti barate. Jiruu biyya Saniitii Fii Jiruu biyya teenya Yeroo wal bira qabee Laalu Warri isaanii/Oromoonni Gabrummaa Hamtuu keeysa akka jiraniis hubate. Achumatti Haadha warraa isaa tan Jalqaba Godhate wajjiin waa’ee kanaa wal marihachuun biyya teenyatti gallee biyyaaf Qabsaahu qabna jechuun waliif galanii 2005tti erga Waggaa 9 achi ture booda gara biyyaa as deebi’an. Bara 2005 Galee isuma Waa’ee Qabsoo yaaduu dabarse. Bara 2006 Isuma namoota Walitti Qaqqabatee Waa’ee kana Marihaachiisa jiru Lolli Maqaa Liyyuu Police ja’amuun Bordodde buqqisuuf Ummata keenya irratti baname. Inniis namaoota Jaare keeysa kan akka isaa kan itti Amanu Goota Oromoo kan yeroo San Lola Sanirratti Wareegamuuf tahuu Goda hiddaa irraa fudhachuun Gara bordoddee Qajeelan.
Namni yeroo Jalqabaatiif federaala dura dhaabbachuun dhukaasa itti bane isaa fii Goota Gaafas Wareegame Umar Martuudha. Umar martuu fii Aadam dheereen Hawaasa of Jalaa qaban waliin Federal polisii Liyyuu Polisii akka malee Kukuffisuun bardodde irraa erga baasan Waraanni biraa duubaa dhahuun Gooticha akka isaa Umar Martuu biraa ajjeesan. Yeroo Umar dhayamu inni akka Malee Geeyraree Loltoota waliin jiran Hamilee itti godhee Waraana duuba itti dhufees Cabsuudhaan Bordoddee nu dhaaluuf ka’an nuuf hambisan.
Baruma san keeysa Sooreyyootni Oromoo Qofti warri karaa deeman Bordoddee fii Dirree Qaalluu Jiddutti Qaama hin beekamneen akka malee Saamamaa fii ajjeefamaa turan. Sooreyyonni kun Warra Harargee Lamanii hanga Aadamaa fii Finfinnetti Horii fii waan gara garaa daldalaa turaniidha. Isaan Keeysa kaniin an beeku kan Bordoddee fii Dirree Qaalluu jiddutti Lubbuu isaa dhabe Sooreysa Asaboot yeroo sanii kan tahe Abbaa Hiyyeessotaa Mohammed Aadam faa dha Rabbi Jannataan haa Qaniiniisuu. Aadam dheeree Roorron tun akka Malee isa butuun Shiftoota achitte galee Oromoota fixaa ture san dhabamsiisuuf Kilaaah isaa Fudhatee Mudhii isaa Sinnaaraan Gil godhatee hidhatee itti lafa ka’ee yeroo san Kaan ajjeesee kaaniis achii baafachiise……………………Seenan tun itti fuftii yoo Rabbi je’e Boruuf na eeggadha.
Qopheessaaa fii Barreeysa
Via Shukrii Mohammed Umaraa